testosterone cypionate ကုန်ကြမ်း: သင် steroids အကြောင်းကိုသိသင့်! | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/Trenbolone , Trenbolone Acetate/testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်: သင်အံ့သြဖွယ် steroids အကြောင်းကိုသိသင့်သမျှအရာအားလုံး !!!
အပေါ် Posted 02 / 15 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Trenbolone, Trenbolone Acetate.
testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်: သင်အံ့သြဖွယ် steroids အကြောင်းကိုသိသင့်သမျှအရာအားလုံး!
1.What testosterone cypionate ဖြစ်သနည်း / testosterone cypionate ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် testosterone Cypionate ၏ 2.History
3.What testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သနည်း 4.What ပုံစံ (s) ကို testosterone cypionate အမှုန့်ထဲမှာလာသလဲ,
5.How testosterone cypionate အလုပ်သနည်း testosterone Cypionate ၏ 6.Potential အကျိုးကျေးဇူးများကို
7.How ငါ testosterone Cypionate ကိုသုံးပါသင့်သလဲ testosterone Acetate ငါထိုးသွင်းသင့်သလဲ EDTestosterone Cypionate များအတွက် 8.Testosterone Cypionate ထိုး ED အဘို့အထိုး
9.Testosterone Cypionate ကာယဗလများအတွက်ထိုး 10.Femal
အီး testosterone Cypionate သောက်သုံးသော
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကနေမူးယစ်ဆေး testosterone Cypionate စေရန် 11.How?
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဗီဒီယို
| ။testosterone Cypionate အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: testosterone Cypionate
ဘာဖြစ်သလဲ testosterone cypionate? / testosterone cypionate ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
testosterone Cypionate များသောအားဖြင့်အဘို့, မရရှိနိုင် testosterone ၏များစွာသော esterified မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ကာယဗလ နှင့် ED ကုသတူအခြားသူတွေ testosterone acetate,testosterone decanoate, testosterone enanthate, testosterone phenylpropionate, testosterone isocaproate,testosterone propionate,testosterone Sustanon 250လူအပေါင်းတို့ testosterone ၏မျိုးကွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
testosterone Cypionate အများဆုံးဖွယ်ရှိဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး esterified မူကွဲ (ပထမဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် testosterone Enanthate) ။ ဒါဟာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ထိုးဆေးပုံစံ testosterone ၏ဖြန့်ချိပြီးကြာကြာဝက်ဘဝတစ်နှေးကွေးမှုနှုန်းနှင့်အတူ။ သို့သော် testosterone Cypionate နှင့် testosterone Enanthate နှစ်ဦးစလုံး၏လွှတ်ပေးရန်နှုန်းထားများနှင့်ဝက်ဘဝကိုအလွန်တူညီဖြစ်ကြပြီးနှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုဥပမာအနေနဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိုအလွယ်တကူ testosterone တစ် 10 တပတ်သံသရာ run နိုင်ပါတယ်နှင့် testosterone Enanthate နှင့် testosterone Cypionate အကြားအကူးအပြောင်း (လွယ်ကူစွာအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ချောမွေ့စွာ) ။ testosterone Enanthate ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 ကာလ၏တစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာ testosterone Cypionate ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ကာလ၏တစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝကိုပိုင်ဆိုင် - ခဲတာကွာခြားချက်။ testosterone Cypionate ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတကယ်တော့သို့သော်ကြောင့်အကြားလူကြိုက်များတဲ့ကွဲပြားမျက်နှာသာရှိသည်ဖို့ပုံဖြစ်ပါသည် အမေရိကန်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများ အဆိုပါ Enanthate မူကွဲကျော်။ ဤရွေ့ကားဘာသာဂုဏ်ထူးသို့သော်အစွန်းရောက်မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှစ်ဦးစလုံးမျိုးကွဲများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်၏ဘုံအစဉ်အဆက်ဒီတော့အနည်းငယ်ပိုပြီးလူကြိုက်များ testosterone Enanthate နှင့်အတူနီးပါးနှင့်ညီမျှသည်။ ကိုမမူကွဲအခြားကျော်မဆိုအားသာချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
testosterone Cypionate ၏သမိုင်း
testosterone Cypionate ပထမဦးဆုံးနှစ်လယ်ပိုင်း 1950s အတွက်ဖန်တီးခဲ့, နှင့် (သို့သော်ပထမဦးဆုံးမှာ၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Depo-testosterone cyclopentylpropionate အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရပေမယ့်သိသာဘို့ကိုတိုစေခဲ့သည် UpJohn အားဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Depo-testosterone အောက်ရှိဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်အပေါ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် အကြောင်းပြချက်) ။ (testosterone Enanthate နီးပါးနည်းတူတန်းတူ US မှာအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်ပေမယ့်) အဓိကအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကို item အဖြစ်လူသိများသော testosterone Enanthate, မတူဘဲ, testosterone Cypionate အဆိုပါ Enanthate မူကွဲမှအမေရိကန်အဖြေဖြစ်လူသိများသည်။ testosterone Cypionate က (2009 အတွက် Pfizer နှင့်အတူပေါင်းစည်းသူ) Upjohn အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုနေဆဲတကယ်တော့ယနေ့ကြောင်းဤကဲ့သို့သောအပြုသဘောတွင် track record ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ testosterone Cypionate အဆိုပါ 1960s, 70s တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံတကာထုတ်ကုန် testosterone Enanthate, များစွာသောအမေရိကန်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများဖို့အမေရိကန်တုံ့ပြန်ခဲ့များနှင့် 80s အလွန်တစ်ခုအမေရိကန်ထုတ်ကုန်များ၏ထောက်ခံမှုထက်အခြားအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များအတွက် Enanthate မူကွဲကျော် testosterone Cypionate ၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်အဖြစ် မာန၏ပြဿနာအများကြီးကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ (တစ်ဖန်, testosterone ၏ Cypionate နှင့် Enanthate မျိုးကွဲနှစ်မျိုးလုံးနီးပါး 100% တူညီဖြစ်ကြပြီးအခြားအပေါ်မှာတယောက်ဒြပ်ပေါင်းကြိုက်တတ်တဲ့ရန်မလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်) ။
testosterone ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တွေ့ရသောမူလတန်းအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Endogenous testosterone ဟော်မုန်းဟာ testis, Ovary နှင့် adrenal cortex အတွက်ဆဲလ်များကဖန်တီးထားသည်။ ကုထုံး, testosterone ဟော်မုန်းမွေးရာပါသို့မဟုတ်ဝယ်ယူဖြစ်စေ, hypogonadism ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ testosterone လည်းသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးအတွက်ရင်သားကင်ဆာ၏ carcinoma ၏ palliative ကုသမှုများအတွက်အထိရောက်ဆုံး exogenous အန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone 1938 အတွက်အသုံးပြုခဲ့ 1939 အတွက် FDA ကအတည်ပြု။ ဟို steroids, testosterone ဟော်မုန်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ, လုပ်သမျှကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးယခုတ္ထုများထိန်းချုပ်ထားရသည်။ testosteroneများစွာသောနဲ့တူ ဟို steroids, 1991 အတွက်ထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ testosterone ပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့်နှောင့်နှေး-လွှတ်ပေးရေး (သိုလှောင်ရုံ) သောက်သုံးသောပုံစံများအတွက် parenterally အုပ်ချုပ်သည်။ စက်တင်ဘာလ 1995 မှာ FDA ကကနဦး testosterone ဟော်မုန်း transdermal ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ (Androderm) အတည်ပြု; အများအပြား transdermal ပုံစံများနှင့်အမှတ်တံဆိပ် implants, gels နှင့်လိမ်းဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးက testosterone ဟော်မုန်း buccal စနစ်, Striant, FDA ကဇူလိုင်လ 2003 အတွက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်; အဆိုပါစနစ် buccal mucosa မှလိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ထောကျဖြန့်ချိပေးမယ့် mucoadhesive ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ မေလ 2014 မှာ FDA ကတစ်ဦး intranasal ဂျယ်ရေးဆွဲရေး (Natesto) အတည်ပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းအစားထိုးဘို့တစ်ဦးက transdermal patch ကို (Intrinsa) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာဖြစ်၏ အမျိုးသမီးတွေအတွက်အသုံးပြုနေ့စဉ်ဆေးညွှန်းယောက်ျားများတွင်အသုံးပြုထုတ်ကုန်များအတွက်ထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ FDA ကက Intrinsa အမျိုးသမီး testosterone ဟော်မုန်း patch ကို၏ခွင့်ပြုချက်နှောင့်နှေးမည်ဟုနှောင်းပိုင်းတွင် 2004 အတွက်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်နှလုံးသွေးကြောများနှင့်ရင်သားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ပါတ်သက်တဲ့ဒေတာကိုလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
ကုန်ကြမ်း testosterone cypionate, မူးယစ်ဆေး testosterone cypionate များ၏ကုန်ကြမ်း, လေထဲတွင်အနံ့သို့မဟုတ်နီးပါးဒါနှင့်တည်ငြိမ်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင် Crystal Powder ပယ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ထို့နောက်ပြီးဆုံးတဦးတည်းထဲသို့ဖြစ်စေလျက်, မြင့်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်အရက်, chloroform, dioxane, အီ, နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် oils.Many ကာယဗလဖြည့်စွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအတွက်ပျော်ဝင်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ဝင်, ရေထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ် testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏အသေးစိတ်:
အရည်ပျော်မှတ်: 98 - 104ºC
သိုလှောင်မှုကို Temp .: 2-8ºC
အရောငျ: White သို့မဟုတ်အဖြူရောင် Crystal Powder ချွတ်
အဘယ်အရာကိုပုံစံ (s) ကို testosterone cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ထဲမှာလာသလဲ,
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်လေ့လည်း injection.In ၏ပုံစံအတွက်စျေးကွက်ရောင်းချခဲ့ကာထိုးသွင်းရေနံ, အဖြစ်အသုံးပြုသည် 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, အခြို့ UGL ပင် 350mg / ml နှင့် 400mg / ml ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရှိပါတယ်။
ဘယ်လို testosterone cypionate အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
testosterone cypionate testosterone ပိုင်, ဆေးဝါးများ၏အတန်းအန်ဒရိုဂျင်ဟုခေါ်သည် (အထီးဟော်မုန်း) ။ ဤသည်ဆေးဝါးထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေများ, (အခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ခြင်း) ရှိသည်သောအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးအသုံးပြုသည်။ အဲဒီမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအခြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းသာအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသရန်အသုံးပြုသည်။
testosterone cypionate ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်နေသော testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ရောဂါလက္ခဏာနှင့်သွေးစမ်းသပ်မှုများကအတည်ပြုထားပြီးလျှင် testosterone cypionate သာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
Endogenous testosterone ဟော်မုန်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒြပ်တစ်ခုကိုလက်စထရောကနေပြင်ဆင်ထားသည်။ အထီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန်ဒရိုဂျင်၏ function ကို, သန္ဓေသားအတွက်စတင်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းအလွန်အရေးပါသည်ကို၎င်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဆက်လက်။ အမျိုးသမီးများနေ့ကိုလည်းသားဥအိမ်ထံမှ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏအနည်းငယ်ကို secrete ။ အဆိုပါ adrenal cortex ကနေအန်ဒရိုဂျင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအထီးလိင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးမြှင့်အန်ဒရိုဂျင်ပလာစမာပြင်းအားဟော်မုန်း luteinizing, (endogenous testosterone ဟော်မုန်းကိုလျှော့ချ) gonadotropin-releasing ဟော်မုန်းဖိနှိပ်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သော-တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားအားဖြင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း။ testosterone လည်း erythropoietin, ကယ်လစီယမ်၏ချိန်ခွင်လျှာ, အသွေးဂလူးကို့စဖွဲ့စည်းရေးသက်ရောက်သည်။ အန်ဒရိုဂျင်လျှင်မြန်စွာပစ်မှတ်တစ်ရှူးများ၏ဆဲလ်တွေရိုက်ထည့်ဖို့သူတို့ကိုဖွင့်, မြင့်မား lipid နိုင်မှုရှိသည်။ ဆဲလ်အတွင်းမှာပဲ testosterone ဟော်မုန်း 5-alpha-dihydrotestosterone မှ enzymatic ကူးပြောင်းခြင်းကိုသည်းခံနှင့် cystolic receptors နဲ့ထိထိရောက်ရောက်မချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပေါ်လာသော။ အန်ဒရိုဂျင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကူးယူ၏စတင်နှင့်ဤ Steroid တစ်မျိုး-receptor ရှုပ်ထွေးနေဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်နျူကလီးယပ်အတွက်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကနေပေါ်ပေါက်။
ပုံမှန်အားဖြင့် endogenous အန်ဒရိုဂျင်ဆီးကျိတ်, ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သော, လိင်တံနှင့်ကပ်ပယ်အိတ်၏တိုးတက်မှုနှင့်ရငျ့အပါအဝင်သာမန်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု, တာဝန်ရှိသည်တစ်ခုတိုးလာပရိုတိန်း production.These ပရိုတိန်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, RNA polymerase လှုံ့ဆော်ခြင်း။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းအန်ဒရိုဂျင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီပြန်လည်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူ, ကြွက်သားများကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရုတ်တရက်တိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲများလည်းစကားသံကိုနက်ရှိုင်းခြင်း, အသံအိုးနှင့်အသံကွိုးနေရာယူပါ။ အပျိုဖော်ဝင်မုတ်ဆိတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်၏တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်။ spermatogenesis များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ပါသည်အဖြစ် epiphyses နှင့်တိုးတက်မှု၏ရပ်စဲ၏ Fusion လည်း, ထိုအန်ဒရိုဂျင်များကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ endogenous အန်ဒရိုဂျင်မရရှိနိုင်ပါတဲ့အခါ, exogenous အန်ဒရိုဂျင်၏အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အထီးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
testosterone ရှည်သရုပ်ဆောင်လုံးလေးများ၏ implantation အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် buccal စနစ်များမှတဆင့်, transdermal စုပ်ယူများအတွက်လိမ်းလိမ်းဆေး, ဖြေရှင်းချက်, နံ့သာဆီသို့မဟုတ် transdermal စနစ်များအဖြစ်အရေပြား, (IM) intramuscularly အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေသည်။
testosterone (IM) intramuscularly အုပ်ချုပ်လျက်ရှိ၏ အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးမှတဆင့်; transdermal စုပ်ယူများအတွက်လိမ်းလိမ်းဆေး, ဖြေရှင်းချက်, နံ့သာဆီသို့မဟုတ် transdermal စနစ်များအဖြစ်အရေပြားခြင်းငှါ၎င်း, အချိန်ကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင်လုံးလေးများ၏ implantation အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်; buccal စနစ်များမှတဆင့်။
သွေးရည်ကြည်အတွက်, testosterone ဟော်မုန်းပရိုတိန်းမှခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိင်ဟော်မုန်းစည်းနှောင် globulin (SHBG) အတွက်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့် albumin များအတွက်အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ albumin-ခညျြနှောငျသောအဘို့ကိုလွတ်လပ်စွာ dissociates ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး SHBG အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ဆှဖှေဲ့။ ဒါဟာ prepuberty စဉ်အတွင်းမြင့်မားသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝကိုစဉ်အတွင်းငြင်းပယ်, ထို့နောက်အသက်ကြီးထပြန်။ အဆိုပါတက်ကြွ metabolite DHT testosterone ဟော်မုန်းထက် SHBG များအတွက် သာ. ကွီးမွတျဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။ ပပျောက်ရေးနေ့ဝက်ဘဝ 10-100 မိနစ်နှင့်ပလာစမာထဲမှာအခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုအပေါ်မှီခိုသည်။
testosterone အမျိုးမျိုးသော 17-keto steroids ဖို့အသည်းထဲမှာအဓိကအား metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ ဒါဟာ Hepatic cytochrome P450 တစ်အလွှာ (CYP) 3A4 isoenzyme.1 Estradiol နှင့် dihydrotestosterone (DHT) ကိုအဓိကတက်ကြွ metabolites ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, DHT နောက်ထပ်ဇီဝြဖစ်ခြင်းကိုသည်းခံဖြစ်ပါတယ်။ testosterone လှုပ်ရှားမှု cytosol အဲဒီ receptor ပရိုတိန်းဖို့ချည်နှောင်ထားတဲ့ DHT ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်မူတည်မှပေါ်လာသည်။ DHT ၏နောက်ထပ်ဇီဝြဖစ်မျိုးဆက်ပွားတစ်ရှူးနေရာကြာပါသည်။ တစ်ဦးအသား testosterone ဟော်မုန်းထိုး၏အကြောင်း 90% glucuronic နှင့်ဆာလဖျူအက်ဆစ် conjugation အဖြစ်ဆီးထဲမှာပြန်ထွက်သွားသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း 6% အကြီးအကျယ် unconjugated သည်မစင်ထဲမှာပြန်ထွက်သွားသည်ဖြစ်ပါတယ်။ စာပေအစီရင်ခံအဖြစ် testosterone ဟော်မုန်းများ၏ထက်ဝက်-အသက်တာ၌စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအပြောင်းအလဲ 10 ထံမှ 100 minutes.2 အထိရှိပါတယ်
ထိခိုက် cytochrome P450 isoenzymes နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: CYP3A4, P-GP ။
testosterone CYP3A4 တစ်အလွှာသည်နှင့်လည်းအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်, P-glycoprotein (P-GP) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခု inhibitor ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး။
testosterone Cypionate ၏အလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကို
testosterone Cypionate ထိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအနိမ့် T နဲ့ယောက်ျားသည်သို့မဟုတ် testosterone Cypionate ကာယဗလများအတွက်အနိမ့်တီနှင့်ပတ်သက်သောလိပ်စာပြဿနာများကိုကူညီပေးဖို့အထီးဟော်မုန်းပမာဏထိန်းညှိကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, testosterone Cypionate ထိုး၏အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်နိုင်ပါသည်:
တစ်ခုတိုးလာလိင် drive ကို
အဘယ်သို့ငါ testosterone Cypionate ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
testosterone Cypionate ဆေးများဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အသုံးပြုသူရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြသည်။ အားလုံးရောနှောအစုလိုက်အပြုံလိုက်သံသရာအမှီ, bulking, ဖြတ်တောက်ခြင်း - testosterone Cypionate ဆေးများမဆိုဖြစ်နိုင်သောရည်မှန်းချက် လိုက်. နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူရဲ့ goal.For ဥပမာပေါ် မူတည်. testosterone Cypionate ဆေးများအကြားကွဲလွဲမှု, ဆေးများ၏ကာယဗလပ္ပံယေဘုယျအားဖြင့်အမြောက်အများဖွင့်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသို့မဟုတ်ပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် add ကြောင့်တစ်ဦးချင်းအဘို့လိုအပ်သည်။ ဖြတ်တောက်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကြောင့်မူလတန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆီဆုံးရှုံးမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးကြွက်သားအရှုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုစဉ်အတွင်းကြွက်သားထုထည်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အခါဆိုတဲ့အချက်ကိုမှနေကြပါတယ်ထိုးအတွက်အလွန်မြင့်မားသောစွမှယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ဟိုစတီရွိုက်များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲစွန့်စားမှု။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အနိမ့်ဆေးများများသောအားဖြင့်လိုအပ်သမျှသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။
ပညာရေးအဘို့အ testosterone Cypionate ထိုး
ဆေးပညာ၏လယ်ပြင်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့ (hypogonadism နှင့် andropause) ၏ရည်ရွယ်ချက် testosterone Cypionate ဆေးများအဘို့အညွှန်းလမ်းညွှန်ချက်အတွင်း 50 ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါသည် - 400 ရက်သတ္တပတ် - 2mg တိုင်း4တစ်ချိန်ကအုပ်ချုပ်။ အဆိုပါသီးခြားထိုးအမြဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်,
testosterone Cypionate ဆေးများလည်း testosterone အစားထိုး Therpay (TRT) ဆေးများ၏ပါဝင်သည်။ ဒါကတစ်ဦးချင်း testosterone Cypionate နှင့် testosterone Cypionate မျှသာ testosterone ၏ပုံမှန်ဇီဝကမ္မအဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းများ၏ထောက်ခံအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကြာနေချိန်မှာဟို Steroid တစ်မျိုးကြွက်သားကြီးထွားသက်ရောက်မှုများကိုတိုနှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းဟို Steroid တစ်မျိုးသီးနှံများကိုပုံရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းဘယ်မှာသံသရာအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ testosterone Cypionate ၏ 100mg အပတ်စဉ်၏တစ်ဦးကထိုးတဲ့လုံလောက်သော TRT ထိုးစဉ်းစားသည်။ မဆိုပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ supraphysiological testosterone Cypionate ဆေးများကနေတိုးမြှင့်မွှေးကြိုင်များ၏အန္တရာယ်ကို run ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။
အဘို့အ testosterone Cypionate ထိုး ကာယဗလ
base စွမ်းဆောင်ရည် testosterone Cypionate ထိုး:
စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်, အခြေစိုက်စခန်း testosterone Cypionate ကာယဗလဆေးများရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 400-500mg ကျပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့များစွာသောလူတို့သညျအဘို့ဤသူတို့ရောက်ခဲ့ဖူးလျှင်ပင်အစဉ်အဆက်လိုပါလိမ့်မယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် ဟိုစတီရွိုက်သုံးပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ။ ဒီအကွာအဝေး၏ testosterone Cypionate ဆေးများအလွန်အများဆုံးကျန်းမာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့ကောင်းစွာသည်းခံဖြစ်ကြပြီးသံသရာပြီးနောက်အစဉ်မပြတ်ကောင်းစွာသံသရာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှေ့တျော၌သံသရာကို run ဘယ်တော့မှင့်လျှင်သင်သည်သင်၏ခြုံငုံတုံ့ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်သကဲ့သို့သင်တို့စတင်ချင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ, ဒီဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုမြင့်မားသော testosterone Cypionate ထိုး:
ခြေရင်းစွမ်းဆောင်ရည်မျက်နှာပြင်အထက်ပိုမိုမြင့်မား testosterone Cypionate ကာယဗလဆေးများဆန်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျတစ်ပတ်ကို 600-1,000mg နှင့်အတူဖြည့်စွက်တဲ့သူအများအပြားယောက်ျားတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာယောက်ျားနေဆဲ 600mg အကွာအဝေးအလွန်ခံသာဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအမှတ်ထက်ကျော်လွန်ဆေးထိုးတိုးအဖြစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလွန်တိုးမြှင့်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ testosterone Cypionate ဆေးများရက်သတ္တပတ်အမှတ်အသားလျင် 1,000mg ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီသိသိသာသာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ ပျမ်းမျှအားကစားရုံကြွက်အဘို့, သူ့ testosterone Cypionate ဆေးများရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 400-600mg စွန့်ခွာဖို့လိုအပ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသည်သူတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ကာယဗလမယ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ပိုမိုအမာခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်သူများအဘို့, သူ့ဆေးများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောဆေးများလုံခြုံစွာ run နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တကစုစည်းအားထုတ်မှုနဲ့ပညာတတ်အသုံးပြုမှုကိုယူတော်မူမည် သတိထားအကြံပြုသည်။
ကာယဗလ testosterone cypionate ရှည်သရုပ်ဆောင်, တစ်ခုတည်း Ester testosterone ဟော်မုန်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 8 ကာဗှတစ်အရှည်ရှိပြီး, အချင်းချင်းအပြန်အလှန် muscularly ထိုးသွင်းအခါ adipose တစ်ရှူးများတွင်အများအားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်ကြောင့်ထိုးသွင်းပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြန့်ချိသည်။ ထို့နောက်ထိုအသွေးကိုဆေးထိုးပြီးနောက် cypionate အထွတ်အထိပ် 24-48 နာရီအဆင့်ဆင့်နှင့်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်း။ ထိုအသွေးကိုအဆင့်ဆင့် 12 ရက်ပေါင်းကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက်တည်ငြိမ်မှတ်ကိုရောက်ရှိသုံးယောက်ကျော်ရက်သတ္တပတ်အဲဒီမှာနေဖို့။ Cypionate ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်ပေးသောအချိန်တွင်တစ်ဝက်အထွတ်အထိပ်ထိုးထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့နိမ့်ဆုံးထိုးစေသည်ရာတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထိုးသွင်းသည်။ မဆို testosterone ဟော်မုန်း, အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆောက်၏ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့မည်သည့် Steroid တစ်မျိုး stack များအတွက်ထိရောက်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အရေးကြီးသောကုန်ကျနေကြသည်။ တစ်ဦးတည်းသုံးအသုံးပြုသူအချို့သိသိသာသာအကျိုးအမြတ်ကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ cypionate ၏ရှည်လျားသောသရုပ်ဆောင်သဘောသဘာဝတည်ငြိမ်အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အသုံးပြုသူလျော့နည်းမကြာခဏထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးကကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်း Ester သင့်ရဲ့ bulk လိုအပ်ချက်များအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်မည်, cypionate ထွက်ရှိအခြား steroids အချို့ထက်ပိုမိုရိုးရှင်းသည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောမရသည့်ရောဂါများ၎င်း၏ရှယ်ယာမပါဘဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အထူးသဖြင့်တိုးမြှင့်ကာယဗလအသစ်သူတို့အဘို့, ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ရှည်လျားသောအရှည်ကြောင့်အချိန်တိုးချဲ့ကာလကျော်ကဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုမိုဆိုးရွားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်ပျစဲ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်မှု၌တစ်ဦး option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့သော nolvadex, proviron, clomid နှင့် hCG သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု restore ကိုကူညီနှစ်ဦးစလုံးသံသရာနဲ့ post သံသရာကာလအတွင်းကူညီလိမ့်မည်။ testosterone cypionate sustanon ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီး aromatize ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးအခါ, တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သော nolvadex သို့မဟုတ် clomid အဖြစ် Anti-အီစရိုဂျင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်နှင့် gyno လက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်သည့်အခါသူတို့ထဲကတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပါ။
အမျိုးသမီး testosterone Cypionate သောက်သုံးသော
အမျိုးသမီးဟို Steroid တစ်မျိုးသည်အသုံးပြုသူများအကြား testosterone Cypionate များအသုံးပြုမှုကြောင့်ဒီအားကောင်းတဲ့အန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းသည်, virilization လက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းကများဖြစ်ကြပြီးအလွန်လျှင်မြန်စွာကိုထင်ရှားစွာပြလေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်အလွန်ဆန်းပါပဲ။ testosterone Cypionate ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအသုံးပြုရန်အကြံပြုနှင့်ဤဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူလေ့အကျင့်များဟောဒီမှာအပေါ်အနည်းငယ်သာဒေတာအဲဒီမှာတည်ရှိမပေးပါ။
ငါ testosterone Cypionate ယူမီဘာတွေသိထားသင့်သလဲ
အကယ်. သင် testosterone Cypionate သုံးစွဲဖို့ခွင့်မပြုပါ:
သငျသညျ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုတည့်မှုသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ဆေးထိုးမဆိုနဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရှိသည်။
သင်သည်ဤတဦးတည်းတူသောမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါး, အခြားမည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအစာ, သို့မဟုတ်အခြားတ္ထုများမှမတည့်ကြသည်။ အဖုကဲ့သို့သင်သည်ခဲ့တည့်မှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ; အသင်းအဖွဲ့ချုပ်; ယားယံခြင်း, အသက်ရှုမဝြခင်း, အသက်ရှူကြပ်; ချောင်းဆိုး; မျက်နှာ, နှုတ်ခမ်း, လျှာ, သို့မဟုတ်လည်ချောင်းများရောင်ရမ်းခြင်း, သို့မဟုတ်အခြားအရိပ်လက္ခဏာ။
နှလုံးရောဂါ, ကျောက်ကပ်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်အသည်းရောဂါ: သင်ကဤကျန်းမာရေးပြဿနာများမဆိုရှိသည်။
ဤသည်ကိုသင် testosterone Cypionate အကြောင်းကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝစာရင်းမဟုတ်ပါဘူး။
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာငါသည်အဘယ်သို့သိပါသင့်သလဲ
အတူအပြန်အလှန်ရန်လွယ်ကူသည်အရာအချို့ဆေးဝါးများ, testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးနေစဉ်ထိုထုတ်ကုန်ကိုမသုံးကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးရှိပါတယ်:
warfarin ကဲ့သို့အသွေးခဲလိုဆကျဆံသို့မဟုတ်တားဆီးကြောင်း -medicines
prednisone သို့မဟုတ် cortisone တူသော -steroid ဆေးဝါးများ
ငါ testosterone Cypionate ယူပြီးပြီးနောက်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ
° F ကို 68 မှ 77 ° F ကိုမှာဒီဆေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်း (20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို C ° 25 မှ) နှင့်ကွာအပူ, အစိုဓာတ်နှင့်အလင်းထဲက။
testosterone Cypionate စက်ဘီးနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လာမယ့်ဆေးထိုးဘို့အချိန်နီးကပ်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, လွဲချော်ထိုး skip နှင့်သင့်သာမန်အချိန်ပြန်သွားပါ။
နီးပါးဆို testosterone မူကွဲသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာနှင့်ဝသကဲ့သို့, testosterone Cypionate သံသရာနီးပါးအမြဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိမှု, bulking နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ရေးကာလရရှိမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အသုံးပြုသွားမည်ခံရဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ယင်း၏စံပြအသုံးပြုမှုဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏သော်လည်း, ဒီကအဆီဆုံးရှုံးမှုမူလတန်းရည်မှန်းချက်ရှိရာသံသရာဖြတ်တောက်ဘို့ (ကနိမ့်သောက်သုံးသောမှာဆိုသော်ငြား) ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုသောမရနိုင်ကြောင်းပြောပါသည်မဟုတ်။ bulking နှင့် / သို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှငျ့ခှနျအားရရှိမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, testosterone Cypionate များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောက်သုံးသော (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500mg / ရက်သတ္တပတ်) မှာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပိုရှည် Ester ကြောင့် 12 ရက်သတ္တပတ်, ထို့ကြောင့်ရှည်ဝက်ဘဝ - ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် 14 တဲ့ကာလအဘို့ဤသောက်သုံးသောမှာအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ testosterone Cypionate 10 န်းကျင်၏တစ်ဝက်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင် - 12 ရက်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အနီးကပ်ရှိသော counterpart testosterone Enanthate7န်းကျင်၏တစ်ဝက်ဘဝကိုအတူနီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - 10 ရက်။
ကဖြတ်တောက်သို့မဟုတ် bulking ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိနေပါစေသံသရာရည်မှန်းချက်, testosterone Cypionate များသောအားဖြင့်အတူအသုံးပြုသွားမည်နှင့်သိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်ဆင်တူဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိမ်းယူသောအခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone Cypionate အဖြစ် 10 ရက်သတ္တပတ်အရှည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Dianabol (Methandrostenolone) အဖြစ်တစ်ဦး '' kickstarting 'ဝင်းပုံမှန်အားဖြင့်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် - ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူပင် 12 အဘို့ကို run ထားတဲ့ထိုကဲ့သို့သော Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) အဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ဘုံအဖော်ဖြစ်ပါသည် ပတ်လည်ရက်သတ္တပတ်4သို့မဟုတ်6မှာရပ်စဲသည်အထိသံသရာ၏စတင်ပါ။
testosterone ဟော်မုန်း cypionate နှင့်အောက်ပါတို့မှမည်သည့်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်:
adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH)
corticosteroids (ဥပမာ hydrocortisone, prednisone, methylprednisolone)
ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးများ (ဥပမာ chlorpropamide, glipizide, glyburide, အင်ဆူလင်, Metformin ဆေးဟာလည်း, nateglinide, rosiglitazone)
သင်တို့သည်ဤဆေးဝါးများမဆိုယူနေတယ်ဆိုရင်, သင်ပိုကောင်း testosterone Cypionate ယူ, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆေးထိုးပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတွေနဲ့စကားမပြောချင်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှိသူများထက်အခြားဆေးဝါးများဒီဆေးဝါးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျကိုယူပြီးနေကြသည် over-the-counter (Non-ဆေးညွှန်း), အားလုံးဆေးညွှန်းအကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ပြောပြပါနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးဝါးများ။ သင်တို့ကိုလည်းယူမဆိုဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုသူတို့ကိုပြောပြပါ။ ကဖိန်းဓာတ်, အရက်ကတည်းကစီးကရက်, ဒါမှမဟုတ်လမ်းပေါ်မူးယစ်ဆေးထံမှနီကိုတင်းအများအပြားဆေးဝါးများ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်, သင်ကသူတို့ကိုသုံးနေလျှင်သင့်ရဲ့သတ်မှတ်သိစေသင့်တယ်။
testosterone Cypionate ၏ဘေးထွက်
ဘေးထွက်ဘို့အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကို effects, ရှိသမျှ testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့အ testosterone Cypionate aromatase လှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်သယ်ဆောင်; အီစထိုဂျင်သို့ testosterone ဟော်မုန်း၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်းမွှေးကြိုင်။ အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်အဖြစ်, ဒီ gynecomastia (အထီးရင်သားကင်ဆာပျတိုး) နှင့်ပိုလျှံရေ retention ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပိုလျှံရေ retention ကိုပင်အဆိုးသွေးဖိအားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ in-အမိန့်, အထူးသဖြင့် gynecomastia, ထိုကဲ့သို့သော Anastrozole (Arimidex) ကဲ့သို့သောဆေး Tamoxifen citrate (Nolvadex) နှင့်ပိုပြီးလေးနက်ကာကွယ်မှုများအတွက် Aromatase inhibitors (AIs) အဖြစ်ရွေးချယ် estrogen receptor Module (SERMs) မှများစွာသောအလှည့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများတိုက်ဖျက်ဖို့။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင် AIs အထိရောက်ဆုံးပါ၏ သို့သော်သူတို့သည်လည်းသူကအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်လက်စထရောနဲ့သတိထားမှကြွလာသောအခါပြဿနာဖြစ်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင် testosterone Cypionate ထိုကဲ့သို့သောဝက်ခြံ, ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ပျတိုးအဖြစ် dihydrotestosterone (DHT) နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်; သို့သော်သူက DHT steroids အဓိကတရားခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမပါဘဲသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှိမ်နင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင် DHT ပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် in-အလို့ငှာကာကွယ်မှုပေး, ထိုကဲ့သို့သော Finasteride အဖြစ် 5-alpha-reductase inhibitors အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်သားရမည်, ဆံပင်ကျွတ်အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ဖို့ predisposed အမျိုးသားများတွင်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကနေမူးယစ်ဆေး testosterone Cypionate အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီနေရာတွင် (ကိုးကား) testosterone Cypionate အောင်၏ရိုးရှင်းချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ 100 မီလီဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ mL / mL ဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်:
testosterone Cypionate .............................................................................. ။ 100 မီလီဂရမ်
Cottonseed ရေနံ ............................................................................................. 736 မီလီဂရမ်
(ဓါတ်ကဲ့သို့) Benzyl အရက် .................................................................. 9.45 မီလီဂရမ်
အဆိုပါ 200 မီလီဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ mL / mL ဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်:
testosterone Cypionate .............................................................................. ။ 200 မီလီဂရမ်
Benzyl benzoate .......................................................................................... ။ 0.2 mL
Cottonseed ရေနံ ............................................................................................. 560 မီလီဂရမ်
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်းမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်?
testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဟာဟို Steroid တစ်မျိုးကမ္ဘာကြီးအတွင်းအတန်အသင့်လူကြိုက်များဝင်းဖြစ်ပြီး, မကြာခဏလူကြိုက်များများအတွက် testosterone Enanthate နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။ ဒါဟာအတော်လေးဘုံသည်နှင့်လည်းအလွယ်တကူထုတ်လုပ်သကဲ့သို့, စျေးကွက်အပေါ်ဒီထုတ်ကုန်တည်နေရာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိသင့်ပါသည်။
testosterone Cypionate အွန်လိုင်းရင်းမြစ်များမှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, စျေးနှုန်းများစျေးကွက် vary.In စေခြင်းငှါ, testosterone Cypionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်% -60% puirty 99 ကနေအထိလည်းဆေးဝါးတန်းတဦးတည်း, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုပွဲရှိပါတယ် ဒါကြောင့်အနိမ့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူသူတွေကိုအမှုန့်ဖို့ပိုပြီး products.Compared ထုတ်လုပ်နိုင်သည်အကြောင်းမရှိမြင့်မားသောစျေးနှုန်း, သူကမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဦးတည်းကိုဝယ်ခြင်းငှါထိုက်ပါတယ်။
Tags: testosterone cypionate အမှုန့်ကိုဝယ်, testosterone cypionate အမှုန့်
68179 Views စာ
testosterone propionate အမှုန့်: အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသင်သိသင့်!
လိင် hormore tadalafil အမှုန့်: သင်သိသင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်လိင်အကြောင်းကို 12 အချက်အလက်များ !!! erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုအတွက်ကုန်ကြမ်း tadalafil အမှုန့် (ED)